Wali ma aragtay Tartan ceynkan ah? (Warbixin xiiso leh) « AYAAMO TV
Wali ma aragtay Tartan ceynkan ah? (Warbixin xiiso leh)
1089 Views Date March 1st, 2014 time 2:23 pm
Dad Tiradoodu ay gaareyso 200 oo Ruux, oo Sigaar cabayaal ah ayaa Dalka Kuuba isku diyaariyay ka qayb galka Tartan ka tirsan Mahrajaan Sanadle ah oo Sigaar cabista lagu tartamo, iyadoo Qof kasta oo Dadkaas ka mida uu ku dadaaalayay inuu Dambas badan oo Haraadiga Sigaarka ah soo saaro.
Waxaa Tartamayaasha laga xulanayay Ninka Dambas Sigaareed isku xiran oo ugu dheer Dunida soo saara, marka la dhameeyo Dhuuqista Sigaarka.
Qaar badan oo Tartamayaasha ah ayaa Madax Xanuun daremay intii Dhuuqitaanka Sigaarka lagu jiray, balse ugu dambeyntii Dhoola caddeyn iyo Farxad baa lagu arkay markii ay ogaadeen inay ku guuleysteen sameynta Tiirar dhaadheer oo Dambasta Sigaarka kasoo hartay ah.
Mid kastoo Tartamayaasha ku jira waxaa loo dhiibay Sigaar nooca Kuubaanka ee aadka u wayn, oo Dherarkiisu gaarayo 17.8 Sintiimir.
Tartamayaasha waxay la kulmeen Caqabado ay ku jiraan inaanay intii suurtagal ah kusoo saari karin Dambas Dhererkeedu gaarayso Sigaarkii Asalka ahaa ka hor inta aan la dhuuqin.
Waxay Tartamayaashu fariisteen iyagoo Madaxyadooda ay Gadaal u yar jaleecsanyihiin, iyagoo ka ilaalinaya Dambasta Sigaarka inay kala tagtagto oo ay Miiska ay ku dul fadhiyaan ama Wajiyadooda ay ku daadato.
Intii ay afuufayeen Qiica Sigaarka ayeey Tartamayaashu isku dayayen in Dambasta si isku xiran oo Tiir u eg ay ka sameeyaan, taasi oo u ekeyd isku day aan dhici karin.
Haweeney Tartanka qayb ka ahayd Magaceedana la yiraa April Anjaloni oo iyadu Mareykanka kasoo jeedda ayaa tiri “ Waxay runtii ahayd Isku day Daal badan”.
Gabadhanu waxay ku guuleysatay inay sameyso Dambas Sigaareed Tiir oo kale ah oo gaareysa 13.9 Sintimitir.
Gabadh kale oo Tartanka ku jirtay laguna magacaabo Tamra Tikso, taas oo Dalka Spain kasoo jeedda balse Sigaarka ku Suuq-geysa Dalka Ruushka ayaa iyadana tiri “ Xaalku aad buu uga adkaa sidii aan filaynay”.
Tartanka waxaa lagusoo abaabulay Xarunta Hafana ee Shirarka, oo ah Goob ay Kulamada Siyaasiga ah ee Gudaha Dalkaasi ka dhacaan.
Qaar Tartamayaasha ka mid ah waxay ku qasbanaadeen inay isaga haraan Loolanka, markii ay dareemeen Laqanyo iyo Madax wareer.
Sigaarka waxaa lagu sheegaa Badeecadaha laga dhoofiyo Kuuba kuwooda ugu badan, iyadoo Sanadkii hore sameysay kor u kac gaaraya 8%, oo dhan 447 Milyan oo Dollar.